Fomba Vaovao Mihitsy No Iheveran’ireo Vehivavy Ejiptiana ny Fisaraham-panambadiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2017 7:21 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, македонски, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
Natao ho fahafaham-baràka foana teo anatin'ny fiarahamonina ejiptiana ny fisaraham-panambadiana. Ankehitriny, niova fitsoka ny rivotra momba io zavamisy io.
Ilay vehivavy mpanoratra bilaogy, Shaymaa El Gammal dia mandray anjara [amin'ny teny arabo toy ireo rohy rehetra hita ato] aminà fampielezampeo ety anaty anterineto natokana ho an'ireo vehivavy nisara-bady. Amin'ny fitanisàny an'i Mahasen Saber, ilay tompon'ny bilaogy sy ilay radio “Te Hisaraka Aho”, dia manoratra izy hoe :
Taorian'ny niainako ny maha-bilaogera ahy, nanapaka hevitra ny hanangana fampielezampeo ety anaty aterineto aho, aleon'ny olona kokoa mihaino, toy izay mamaky, ary hahafahako mandona mpihaino maromaro kokoa izay satria hahazo ireo ampahan-taona hafa sy ireo sokajy sosialy hafa ihany koa aho. Fandaharana fototra miisa efatra no anombohako azy : lohatenin'ilay voalohany ny hoe «Ilay tsy takatry ny olona – ilay manokan-tena ho anareo “, izay miresaka ireo olana goavana atrehan'ireo vehivavy misara-bady ao anatinà fiarahamonina iray anjakan'ny lehilahy, ary hatramin'ireo mpiaramiasa any am-piasàna, ny mpiray vodirindrina na ao anatin'ny fianakaviana. Tsikaritro fa, tsy miankina amin'izay fiaviana sosialy niaingàn'izy ireny, na ny lentam-panabeazana voarainy, mitovy daholo ny fomba fijerin'ireo lehilahy ny atao hoe vehivavy nisara-bady – mora azo rebirebena, tonga dia vonona, marefo, malemy ara-maoraly, azo atao tsara ho anton-dresaka sy fosafosa. Izany dia mahatonga ireo vehivavy nisara-bady ho toy ny fonja mandehandeha ho an'ny tenany ihany satria mandra-pahafantatry ny maro ny tena marina, dia izy ireo foana no diso.
Raha nitanisa ny gazety journal Youm7 dia hoy i Hayat momba ilay fandaharana faharoa :
Ny « Eo ambanin'ny fijery ivelany » dia miresaka ireo fihetsehampo ananana momba ny fisaraham-panambadiana ary hampiantrano ireo psikôlôgy manana fahaizana manokana.
Ary momba ny fandaharana fahatelo, manoratra izy hoe :
Ny « Ianao no nanefy ilay vadinao fahiny » dia torolàlana momba ny fomba tokony hitondràna tena manoloana ireo ‘vady fahiny’, arakaraky ny mety aminy sy ho an'ireo zanany – raha olona mitratrevatreva ilay vady fahiny, marina, na mpandrokiroky.
Raha ilay fahefatra kosa miresaka ny :
« Ireo zanakareo – tarana-boanjo foto-boanemba » , miresaka ny fikarakaràna ireo zanaky ny fisaràhana – ny fomba hampianarana fitsipika fitondrantena azy ireny, hanoroana sy hitarihana làlana azy, sy hanohanana an-dry zareo.
Ilay vehivavy bilaogera, Eman Hashim, dia nametraka ety anaty aterineto ny lahatsoratra iray manazava an'ity , nomeny lohateny hoe « Antsika ny tsiny »
و اللى بتفكر فى الحسد و الأر و النبر و تعمله الف حساب عادة الستاللى ربى الراجل على ان المطلقة دى واحدة هاتموت و تبقى مع اى راجل و لو نص ساعة الست
اللى ربت بنتها انها تقبل اى اهانة فى الخطوبة عشان تتجوز لحسن ده خلاص مفيش عرسان ستو اللى انضربت قدام ابنها و بنتها و ما قالتش حاجة لحست تتطلق و المطلقة دى سبة … برضه ست
Vehivavy ilay matahotra ny “tokantrano rotiky ny mpisara-panambadiana”.
Vehivavy ilay manafina ny fitondràny vohoka amin'ny vehivavy iray nàmany “antitra an-toerana”.
Mbola vehivavy ihany koa no ilay matahotra sao misy vehivavy iray hafa mandefa ozona ratsy ho azy.
Vehivavy ilay mitaiza ny zanany lahy hanaraka ny fihevitra hoe hanao izay azony atao mandrakariva ny vehivavy iray nisara-bady mba hahazo lehilahy, na dia ho antsasak'adiny monja aza.
Vehivavy ilay latsaka anaty hadisoam-panantenana ary nanapaka hevitra ny hanambady lehilahy iray efa manambady, ary ho lasa «mpanompony».
Vehivavy ilay nitaiza ny zanany vavy hanaiky izao karazana fanambaniana rehetra ataon'ny fofombadiny izao, noho ny tahotra sao miverina ho tokantena.
Vehivavy ilay voadaroka tsy misy indrafo eo imason'ireo zanany, ary manaiky izany mba hisorohana ny fisarahana am-panambadiana, ny fahafaham-baràka.
Ary farany, i Asser Yasser dia mitondra ireo antontanisa vaovao ho fantatsika rehetra (septambra 2008) momba ireo vehivavy Ejiptiana, mba hampitoniana ny fisavoritahan'izy ireo mahita lehilahy mitorevaka :
Lehilahy ny 51,1% amin'ny mponina ary 48,88% ny vehivavy